संसारकै उत्कृष्ट पाँच बैँकहरु : किन छन् उत्कृष्ट ? – Banking Khabar
संसारकै उत्कृष्ट पाँच बैँकहरु : किन छन् उत्कृष्ट ?
संसारमा पैसाको महत्व बढेसँगै यसको उचित व्यवस्थापनका लागि बैँकिङ प्रणालीको अवधारणाको सुरुवात एवम् विकास भएको पाइन्छ । मानिसका असिमित आकांक्षा र खोज प्रवृत्तिका कारण बैँकिङ प्रणालीमा पनि विभिन्न चरणामा विकास एवम् विस्ता भइरहेका छन् । कारोबार, व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग तथा सम्पन्नताका आधारमा हेर्दा विशेषतः धनी तथा समृद्धशाली मुलुकका बैँकहरुको नाम अगाडि आउँछ । संसारका उत्कृष्ट मानिने बैँकहरु प्रायः चिन र अमेरिकामा रहेका छन् । यसैबीच, संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट पाँच बैंकहरुको बारेमा बैंकिङ खबर डट कमका लागि सहकर्मी रुपा कोइरालाले तयार पारेको सामग्री यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइना
चीनको बेइजिङमा मूख्य कार्यालय रहेको बैंकले बार्षिक ४४८० करोड अमेरिकी डलर बराबर नाफा गर्छ । बैंकको सम्पति मात्र ३.३२ लाख करोड डलर बराबरको छ । यसले सबै खालको व्यवसायमा हात हालेको छ । कर्पोरेट, पर्सनल तथा ट्रेजरी अपरेसनमा बैंकको ठूलो एक्सपोजर छ । कर्पोरेट बैंकिङ सेगमेन्टमा बैंकले कर्पोरेट, ट्रेड फाइनान्स तथा कर्पोरेट वेस्थ म्यानेजमेन्टजस्ता सेवा दिन्छ । पर्सनल बैंकिङमा बैंकले व्यक्तिगत तथा उपभोक्ता कर्जा, पर्सनल डिपोजिट र कार्ड सेवा उपलब्ध गराउँछ । ट्रेजरी अपरेशनमा बैंकले मनि मार्केट ट्रन्जेक्सन, इन्भेष्टमेन्ट सेक्युरिटिज, फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन सुविधा दिन्छ । बैंक १९८४ जनवरी १ का दिन स्थापना भएको थियो ।
बैंक अफ चाइना
चीनको अर्को बैंक सन्सारकै दोस्रो ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हो । यसले बार्षिक २७५० करोड डलर नाफा गर्छ । बैंकको सम्पति २.४५ लाख करोड डलर छ । बैंकको स्थापना सन् १९१२ जनवरी १२ दिन भएको थियो । बैंक अफ चाइना बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाका साथै इन्स्योरेन्स सेवासँग पनि जोडिएको छ । बैंकमा तीन लाख ८ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
जेपी मर्गेन अमेरिकी बैंक हो । यसले बार्षिक रुपमा २१२० करोड डलर नाफा गर्छ । बैंकको सम्पति २.५९ लाख करोड डलर छ । बैंकको उपस्थिति ६० भन्दा वढी देशमा छ । बैंकमा दुई लाख ४० हजार कर्मचारी छन् । बैंकले कर्पोरेट, कन्जुमरका साथै कम्युनिटी बैंकिङ सेवा पनि दिन्छ ।
अमेरिकी वेल्स फार्गो बैंकले बार्षिक २३१० करोड डलर बार्षिक रुपमा नाफा गर्छ । बैंकको सम्पति १.७ लाख करोड डलर छ । बैंक १८५२ मार्च १८ बाट सञ्चालमा आएको हो । सनफ्रान्सिसकोमा मूख्य कार्यालय रहेको बैंकमा २ लाख ६४ हजार कर्मचारी काम गर्छन् । बैंकले कम्युनिटी, होलसेल तथा वेल्थ तथा ब्रोकरेज सेगमेन्टमा काम गर्छ । बैंकले रिटायरमेन्ट सेवा पनि दिन्छ ।
एचएसबिसीको पूरा रुप हङकङ एण्ड सांघाई बैंकिङ कर्पोरेसन हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय प्रोडक्ट र सेवा तथा सुविधाहरुको बंक्वेट मानिन्छ । बैंकको स्थापना १९५९ जनवरी १ मा बेलायती उपनिवेशको समयमा भएको थियो । बैंकको बार्षिक नाफा १३५० करोड अमेरिकी डलर छ । बैंकसँग २.६३ लाख करोड डलर सम्पति छ । बैंकको शाखा युरोप, एसिया, मिडिल इस्ट, नर्थ अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकामा छ ।
पूँजीवृद्धि अभियान : १३ वाणिज्य बैङ्कले पुर्‍याए चुक्तापूँजी
तपाईंको दुई भन्दा बढी डिम्याट खाता छ ? छ भने बन्द गर्नुस्, नत्र खाता रोक्का हुँदैछ
सहकारी चलाउँदै हुनुहुन्छ ? याद गर्नुस् अब ठगी गर्दा बैंकिङ कसुरको कार्बाही हुन्छ
झन् झन् मजबुत बन्दै सरकारी बैंकहरु
के तपाई बैंकमा कार्यरत हुनुहुन्छ ? बैंकिङ कसुरबाट बच्न अपनाउनुस् १५ उपायहरु
डिम्याट खाता : किन खोल्ने ? कसरी खोल्ने ?
१० लघुवित्तको रिपोर्ट : तीनको नाफा घट्यो, दुई नोक्सानमा
ग्रीन र गण्डकीलाई हकप्रद निष्काशनको अनुमति
सामान्य अंकले परिसूचक बढेपनि घट्यो सेयर कारोबार
क्याफे कफी डे मा बैंक अफ काठमाण्डूको १०% छुट
यी हुन् संसारकै सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने बैंकर (जीवनीसहित)
बैंकिङ तरलता व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा प्रविणरमण पराजुली
Ĭ Rupee Exchange Rate
निजी क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी ४.६ प्रतिशतले बढ्यो
हाम्रो बारे | हाम्रो टीम | सम्पर्क कार्यालय : अनामनगर काठमाडौं फोन नं. ०१– ४१०२६०६ Email: bankingkhabar72@gmail.com